DHAGEYSO:- Muxuu Xasan Sheekh Maxamuud kaga Cabsanayaa R/wasaare Cumar Cabdirashiid oo uu horay u cunaqabateeyay | Barbaariyaha bulshada
DHAGEYSO:- Muxuu Xasan Sheekh Maxamuud kaga Cabsanayaa R/wasaare Cumar Cabdirashiid oo uu horay u cunaqabateeyay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan waqtigu uu ka dhamaaday ayaa waxaa soo wajahday Cabsi wayn ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya inay midoobayaan inta badan Musharaxiinta iyo R/wasaare Cumar Cabdirashiid oo ah Musharaxa uu sida gaarka ah isha ugu haayao.
Xasan Sheekh ayaa sidoo kale ka gubtay hadalada ay warbaahinta u marinayeen mudooyinkaanba Musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha.
Ilo lagu kalsoonyahay ayaa Barbaariye.com u xaqiijiyay in musharaxiinta haatan ku sugan Muqdisho iyo R/wasaaraha Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir balaaran isla markaana ay ku heshiiyeen inay midoobaan.
Sidoo kale musharaxiintaan ayaa isku kaashanaya sidii uusan mar kale dib ugu soo laaban lahayn kursiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taas oo haatan ay aad kaga shaqaynayaan.
Xubnahaan ayaa dhowaan ugu baaqay inuu talada dalka ka daga madaxweynaha Maadaama uu waqtigu ka dhamaaday, laakiin Xasan Sheekh ayaa arintaasi dhagaha ka furaystay.
Dhanka kale iyadoo Madaxweynuhu uu ka cabsi qabo awooda R/wasaaraha ayaa dhowaan wuxuu wareegto uu soo saaray uu ku joojiyay dhamaan howlihii xukuumada.